Safaaradda Mareykanka oo war qoraal ah xalay soo saartay kadib shaqo ka joojintii lagu sameeyey taliyaha ciidamada Danab | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Safaaradda Mareykanka oo war qoraal ah xalay soo saartay kadib shaqo ka...
Safaaradda Mareykanka oo war qoraal ah xalay soo saartay kadib shaqo ka joojintii lagu sameeyey taliyaha ciidamada Danab
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku sheegtay inay taageereyso dib u habeyn lagu sameeyo waaxda amniga Soomaaliya, taasi oo ay sheegtay inay mustaqbal ifaya u hogaamin doonto Soomaaliya iyo Soomaalida.
“Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay taageereysaa dib u habeyn lagu sameeyo waaxda amniga taasi oo mustaqbal ifaya u hogaamin doonta Soomaaliya iyo dhammaan Soomaalida. Musuq-maasuqa iyo qaraabo kiilka waxay dib u dhigaan horumarka isbedellada, waxay waxyeeleeyaan amniga shacabka Soomaaliya, waxayna xoojiyaan cadowga Soomaaliya,” ayaa lagu sheegay qoraalka.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Xorriya Online u sheegay in qoraalka Mareykanka uu la xiriiro shaqo ka joojin uu taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneral Odowaa Yuusuf Raage uu ku sameeyey taliyaha ciidamada Danab ee Soomaaliya Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik, taasi oo Mareykanka uu ka xumaaday.
Ma cadda sababta shaqada looga joojiyey taliye Ismaaciil, hase yeeshee dhawaanahaanba taliska xoogga dalka ayaa sameeyay is-badallo u muuqda in meesha looga saarayey dhalinyarada joogo hoggaanada Ciidamada xoogga dalka, xilli lagu jiro marxalad kala guur ah
Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inuu ka xumaaday shaqo joojinta gaashaan Ismaaciil, oo dalka Mareykanka wax kusoo bartay, sidoo kalena shaqo wanaagsan ka qabtay ciidamada Danab.
Dhinaca kale la-taliyaha Amniga Qaranka Cabdisaciid oo ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ayaa soo dhoweeyey taageerada beesha caalamka, balse dalbaday in Soomaalida lala tashado.
“Waxaan ka mahadcelineynaa taageerada joogtada ah ee aan ka helayno Saaxibadda Caalamiga, waxaana aaminsanahay inay door muhiim ka ciyaari karaan horay u socoshada. Hay’adaha Soomaaliyeed waa in lala tashadaa oo ay si firfircoon uga qayb qaataan dejinta, hirgelinta iyo gaarsiinta dhammaan arrimaha muhiimka ah ee amniga la xiriira,” ayuu yiri La Taliyaha Amniga Qaranka.